Manje kungenzeka ukuthi ususe iJailbreak ngaphandle kokubuyisela | Ngivela kwa-mac
Manje kungenzeka ukuthi ususe iJailbreak ngaphandle kokubuyisela
Kuze kube manje, noma yiluphi uhlobo lwe- jailbreak Empeleni, ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch bekudingeka, ukuze isuswe, ukubuyisela idivayisi, okungukuthi, isule bese uyishiya esimweni sefektri uphinde ufake uhlelo lokusebenza. Manje ngiyabonga I-Cydia Impactor, akukho kulokhu okudingekayo.
Sala kahle ekuqhekekeni kwejele ngaphandle kokubuyisa
USaurik, i-protagonist eyaziwa emhlabeni jailbreak, Usungule I-Cydia Impactor, i-tweak ekuvumela ukuthi ukwenze i-unjailbreak ku-iPhone yakho, i-iPad ne-iPod touch ngaphandle kwesidingo sokubuyiselwa.
Uma ufuna ukuthengisa noma ukudlulisela ifoni yakho komunye umuntu, ugcine amandla abo okukwenza jailbreak, uma unezinkinga zokusebenza futhi ufuna ukwenza kabusha jailbreak kusuka ekuqaleni kuze kube uma ufuna nje ukuvalelisa jailbreak kudivayisi yakho ngoba ucabanga ukuthi awusayidingi, I-Cydia Impactor kungaba yisixazululo. Ukusebenza kwayo kulula kakhulu njengoba kudinga isenzo esincane kumsebenzisi, noma kunjalo, inqubo ingaqhubeka isikhathi eside futhi yehluleke.
I-Cydia Impactor kuzodala wonke amafayela kudivayisi aguquliwe kepha angabhujiswanga jailbreak ilandwe futhi ngqo kusuka ku-Apple. Kuluhlu olucelwe isikhathi ngokucophelela lokufuduka kwamafayela lapho wonke amafayela amasha ehanjiswa ekwahlukanisweni komsebenzisi, futhi yonke idatha yohlelo ibuyiselwa emuva ekwahlukanisweni kwesistimu.
Uma isikhashana I-Cydia Impactor yehluleka kwinqubo yokususa ifayela le- jailbreak noma idivayisi iqala kabusha, inqubo ingaphindwa ngokuhamba kwesikhathi. Ekugcineni, ngemuva kokuthi lonke ushintsho lwenziwe ohlelweni lwefayela, yonke idatha yomsebenzisi iyasulwa, futhi uhlelo lokusebenza lwe-iOS luzokwazisa "ukusetha kabusha konke okuqukethwe nezilungiselelo".
Njengoba kuphawuliwe kusuka ku- iClarified, umqondo ukuthi leli "windi elibucayi" lihlala kuphela imizuzwana embalwa yokugcina yenqubo ehlala imizuzu eminingana kuye ngemininingwane esinayo kudivayisi yethu esifuna ukwenza kuyo jailbreak.
Lapho idivayisi iqala kabusha, kuzobukeka sengathi yenze okokuqala lapho ivulwa, kungabikho nomkhondo we ukuphuka kwejele.
Ukwenza futhi jailbreak ku-iPhone yakho, i-iPad noma iPod touch umane landela inqubo.
ISEXWAYISO: I-Cydia Impactor Kusenguqulo ye-beta ye-iOS 8.3 ne-iOS 8.4 ngakho-ke ungalokothi ukhohlwe ukwenza isipele ngaphambili futhi ngaleyo ndlela ugcine yonke idatha namafayela akho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Manje kungenzeka ukuthi ususe iJailbreak ngaphandle kokubuyisela
Vula noma uvale imodi emnyama ngesinqamuleli sekhibhodi